फिचर « epurwa
हाम्रो सपना पूरा भएको छ, धेरै खुसी छौं : पारस खड्का (भिडियो सहित)
झापा , चैत २ l ‘बेचैन !’ पारस खड्काले सन्देश पठाए, ‘सबै रिफ्रेस गरिरहेका छन् ।’ नेपाली टोली ३.२५ बजे हरारेस्थित होटल पुगेको थियो । टोलीका हरेक सदस्य ल्यापटप, मोबाइलमा थिए र
५४ वर्षदेखि ना‌ंगै खोरमा रहेका तर्कबहादुरलाई नागरिकता
उदयपुर, फागुन ७ । घर छेउमा खेतको डिल । खेतको डिलमा सानो खोर । झट्ट हेर्दा त्यो खोरमा सुँगुर वा बाख्रा पालिएको हुनुपर्ने अनुमान हुन्छ। तर खोरमा पशु चौपाया वा
ट्रेकिङले जुराएको जोडी
रामहरि श्रेष्ठ ओखलढुंगा, माघ २८ । ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका ३ हर्कपुरका अशोक फुयाल एक ट्रेकिङ व्यवसायी हुन् । उनले व्यवसायीक रुपमै ट्रेकिङ व्यवसाय गर्न थालेको १६ बर्ष भयो । यस अवधीमा
‘जिउँदो शहीद’ को रिक्सा सहारा
झापा, माघ १६ । जनआन्दोलनमा घाइते गोपाल श्रेष्ठको दैनिकी अहिले फेरिएको छ । उनलाई झापाको धुलाबारी सडकखण्डमा सिटी रिक्सा कुदाइरहेको देख्न सकिन्छ । झापा मेचीनगर–९ खुट्टीडाँगी निवासी श्रेष्ठको सिटी सफारी
बाढीले भत्काएको घर सम्हाल्दै नयाँ दुलही !
राजु पौडेल झापा, पुस २६ । केही दिन देखी लगातार बर्षा भइरहेको थियो । भारतमा रोजगारी गरिरहेका झापा गाउँपालिका–२ का भीमबहादुरलाई उनकी श्रीमती धनमायाले टेलिफोनमा यस्तै सुनाएकी थिइन् । लगातारको बर्षाले
शहरका किसान ! (फोटोफिचर सहित)
झापा भारतको बिहारस्थित सितामढी घर भएका अनिल पट्टेल झापाको बिर्तामोड–७, विराटज्योती स्कुलछेउमा कृषि कर्म गर्छन् । ३० वर्षे यि भारतीय युवा नेपाली भुमीमा पसिना बगाएर बार्षिक २ लाख सम्म कमाउछन्
शिविरमा अल्झिएको जिन्दगी ! (फोटो फिचरसहित)
शब्द : राजु पौडेल तस्विर : शिशिर चम्लागाईं झापा, पुस ५ । पुर्वी नेपालमा दुई दशक अघि आएका नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीको ठूलो संख्या तेस्रो मुलुक पुर्नवासमा गए । तेस्रो मुलुक
गोरखा । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएसँगै गोरखा २ मा पूर्वसहयात्री डा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले पछिल्ला दिन मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न घरदैलो र चुनावीसभालाई आक्रमकरुपमा अघि बढाइरहेका
सडक गीत बन्यो दृष्टिविहीनको सहारा
काठमाडौं, कात्तिक २७ । ललितपुर जिल्लाको व्यस्त बजार लगनखेल । यो बजारमा सधैँ सबै आआफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् । कोही व्यापारमा, कोही गफमा त कोही आफ्नै धुनमा । गत साताको एक
युएर्इमा दलालकाे जालमा यसरी फँसे रुजन, उपचार गराउँदा जागिर नै चट
रुपेश अधिकारी युएई, कार्तिक १९ । एघार महिनाअघि भिजिट भिषामा युएई आएका झापा जलथलका रुजन बनले रोजगारी पाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो। काठमाडौंमा रहेको एक कन्सल्ट्यान्सीमार्फत कामका लागि आएका उनीसँगैका अन्य तीन जना